भोजपुरमा आम्दानीको स्रोत बन्दै वन लसुन, के हो वन लसुन ? | आर्थिक अभियान
असार १, भोजपुर । खेतबारी तथा पाखा पखेरामा पाउने वन लसुन (हाँडे लसुन) भोजपुरका अधिकांश वासिन्दाको राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेको छ । व्यावसायिक रुपमा यसको खेती थालनी नभएपनि यहाँका स्थानीयवासीले वन लसुन विक्री गर्दै आएका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरका अनुसार यसवर्ष मात्र यहाँबाट रू. एक करोड बराबरको करीब ५५ टन वन लसुन बाहिएको छ । व्यावसायीहरुले वन कार्यालयबाट पूँर्जी काटेर आधिकारिक रुपमा विक्री गर्ने गर्दछन् भने कतिपयले सिधै बजारमा पुर्‍याउने गरेका छन् ।